July 2021 – Kaydka Xogaha Dahsoon Iyo Xaqiiqooyinka Foolaad.com
July 13, 2021 Admin@ 0
Jihaan Saadaat waa xaaskii madaxweynihii hore ee Masar Anwar El Sadaat, waxay Jimcihii ku geeriyootay cisbitaal ku yaalla maagalada Al Qaahira halkaas oo maalmo lagu daweynayay. Jihan Saadaat waxay ku geeriyootay da’da 88, dadkii ka [Read More]
Suldaan Nuur Ammaan iyo Ingiriis: Dhacdadii Afduubidii Ingiriiska ee Xaaska Suldaanka
July 10, 2021 Admin@ 0
Dhacdadan waxa buugiisa kusii guurinaya ninkii waaliga ahaa ee 1890s Ingiriiska u fadhiyay magaalada Berbera waqtigaas buugiisa ”Under the Flag and Somali Coast Stories”. Waa ninka la dhaho Langton Prendergast Walsh. Xogtan hoose oo dhanna [Read More]
Silsiladdii Abbokar Cawad iyo Caydiid Lafcambe badhkeed waa kan
Cunfi iyo xumaan ma aha ee waa suugaan hiddeed bulsheed iyo kaftan ilmo adeer, cid la ga xigaana ma jirto. Gundhigga dooddu waa Bari iyo Galbeed in la ka ay ka la doorteen, laakiin arrimo [Read More]
July 8, 2021 Admin@ 0
Hees-ciyaareed hore: Saddex waa war beenaad: Berbera buuri laga waa Basra timir kamey iman Banka Tuuyo caws male ! Dhammaadkii qarnigii 19aad, sahamiyihii Ingiriis ee Swayne, oo wax ka qoray hodontinnimada daaq iyo duurjoogeed ee [Read More]
Noociisu waa: Dab Tayadiisuna waa: Aas-aasi Midabkiisuna waa: Cassaan Maalintiisuna waa: Talaada Dhagaxa burjigani waa: Diamond, Topaz & Sapphire Geedka burjigu waa: Honeysuckle Meeraha hogaamiyaa waa: Saxal-guduud Burjidaya ay heshiiska yihiin waa: Miisaanka & Libaaxa [Read More]
Gabay uu u tiriyaya Radio Hargaysa Gabaygii uu #_radio_hargeisa u tiriyey Xiligii dagaaladii soomaalida iyo amxaaradu socdeen ayuu dadkii ciidamadii xabashidu xasuuqayeen warkoodii ka maqli waayey mar keliya Markasuu yidhi: Raadhyowgan daanyeerkiyo dacawada. Uun sheega [Read More]
Xidhiidhkii Shiinaha iyo Soomaalidu wuxuu ku kaydsan yahay #kaydyaalada(Museums) sooyaalkii ummadda Shiinaha. Dhaxalkii ummadda soomaaliyeed wuxuu kala yaalaa meelkasta iyo kaydyaal kasta oo adduunka oo dhan. Waa wax uu xidhiidh lahaa waagii hore iyo wax [Read More]